Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Na -atọ ụtọ dịka ndekọ Seychelles Karịrị ndị ọbịa 100,000
Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Seychelles nabatara ndị njem si Israel
Ndị njem si na ụgbọ elu El Al LY055 si Tel Aviv si n'ụgbọ ahụ lere ọbịa nke Creole nke agwaetiti ahụ anya.
Ihe omume a dị mkpa maka ebe a na -aga ebe ọnụọgụgụ na -egosi na mbọ gọọmentị na ndị mmekọ tinye na -amị mkpụrụ.
Seychelles bụ otu n'ime ebe izizi mepere maka njem nlegharị anya n'agbanyeghị ịgba ọgwụ mgbochi ndị ọbịa.
Dịka akụkụ nke nnabata pụrụ iche iji mee emume a dị mkpa maka 2021, ndị njem si n'ụgbọ elu El Al LY055 si Tel Aviv si na -ele ọbịa ọbịa Creole nke agwaetiti ahụ, yana ịnata akara ekele sitere na Ngalaba Njem Nleta obodo.
N'ikwu okwu site n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Seychelles nke Pointe Larue, Oriakụ Bernadette Willemin, onye isi ụlọ ọrụ maka ịre ahịa ebe, kwuru na ihe a dị mkpa bụ ihe dị mkpa maka ebe a na -aga ebe ọnụọgụgụ na -egosi na mbọ gọọmentị na ndị mmekọ tinye na -amị mkpụrụ.
“Taa bụ mmalite nke isi dị mkpa na mgbake nke ụlọ ọrụ njem anyị. Seychelles nọ n'ụzọ ziri ezi izute amụma nke Ngalaba njem nlegharị anya mere na Jenụwarị 2021. Ịdekọ ihe karịrị ndị ọbịa 100,000 na ngwụcha izu a na -emesi anyị obi ike na ezi ọrụ ndị mmekọ niile na -eme iji nyere aka na mgbake ahụ. Ana m eto nkwado nke ndị mmekọ ụlọ ọrụ anyị na ndị otu ndị ọzọ nyere aka na ihe ịga nke ọma nke ụbọchị a, ”Oriakụ Willemin kwuru.
Otu n'ime ebe izizi ga -emepe maka njem nlegharị anya n'agbanyeghị ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọbịa mgbe mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa siri ike nke mba ya na ụmụ amaala ya, ọzụzụ nke ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na usoro ahụike na nchekwa yana atụmatụ ya nke imepe ahịa ndị ọzọ. mbata ka ndị Seychelles a na -atụ anya na ha ga -ebili.
Nlaghachi nke obere ụgbọ mmiri na Ọktọba na izu ike nke usoro gburugburu ụwa, ọ bụghị obere na ahịa ọdịnala ya na Western Europe, na -atụ anya ịkwalite mbata ndị njem.
Ahịa 6 na -eduga na 2021, dị ka data nke National Bureau of Statistics nyere, gụnyere Russia, United Arab Emirates (UAE), Israel, Germany, France, na Saudi Arabia.
Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ elu azụmahịa iri gụnyere Air Seychelles, ụgbọ elu mba ya, nke ga -amaliteghachi ụgbọ elu ya na South Africa site na Septemba 10, 26.